Kuningi afisa ukukwenza kwezomculo | News24
Kuningi afisa ukukwenza kwezomculo
Sanele Madonsela umculiIsithombe:Sithunyelwe
UMCULI we-House ozinze eMgungundlovu, uSanele Madonsela uthe wayesafunda amabanga aphansi ngenkathi ethola ukuthi unekhono lokucula.
“Ngangifunda esikoleni samabanga aphansi eLungisile ese Imbali ngiyingxenye yeqembu elalidla umhlanganiso kuyona yonke imincintiswano esasiyingenelela,” kuchaza uMadonsela ngokuqala kwakhe ukuba nothando lwezomculo.
Le ntokazi eneminyaka engu-26 ithe noma kunezinto ezimbalwa ehlele ukuzifeza kungekudala kodwa into esemqoka njenga manje ukuqinisekisa ukuthi umcimbi ezonandisa kuwona e-Ashdown maduzane uzoba yimpumelelo.
Lo mcimbi uzoba ngomhla ka-29 ku-Julayi, e-Ashdown kanti uMadonsela uyathembisa ukuthi abantu abazowuthamela bazowu jabulela umculo wakhe.
UMadonsela uthe okwamanje uyingxenye yohambo oluzohambela khona la e-Ashdown, ludlulele e-Richards Bay luphinde lubuye luzovala khona futhi e-Ashdown ngomhla ka-30 ku-Septemba.
“Abantu baseMgungundlovu abafisa ukungibona ngicula esiteji bengafika kule mcimbi ezobe ise-Ashdown bezozizwela ngezabo izindlebe ukuthi iphimbo lami libusisana kanjani,” kusho uMadonsela.
Eqhuba ngomlando wakhe kusukela esayilungu leqembu esikoleni samabanga aphansi kuze kube yisikhathi samanje, uthe: “Sengineminyaka engu-17 ngaba yingxenye yeqembu elicula owokholo elibizwa ngokuthi i-Living Sound esaqopha nalo izingoma kanye nama-vidiyo,” kusho uMadonsela.
Uthe waqala ukuziculela yedwa ngenkathi engenelela umcintiswano wokucula owawuse Hilton lapho afinyelela khona kuma semi-finals.
“Kulowo mncintiswano ngabonwa umshayi wesiginci owabe esengilekelela ngokuthi nami ngiziqophele owami umculo, lelothuba langivula amehlo ngabona ukuthi kanti nami ngiyakwazi ukubhala izingoma,” kusho uMadonsela.
Uqhube wathi manje usethathe isinqumo sokwenza umculo we-House kanti njenga manje uqopha i-albhamu yakhe yokuqala.
“Sesiqophe amaculo ayisikhombisa sino-Gama Beats kanti futhi ngiphinde ngasebenza no-Sonik Soul engomeni ethi It’s A Party.
Eminyakeni eyisihlanu ezayo ngizibona sengikwazi ukudlala isiginci njengoba ngisifunda njenga manje kanti futhi ngizididiyela mina umculo wami ngoba nokuba u-dj kuyinto engicabanga ukuyenza nayo,” ephetha uMadonsela.